Red Giant သည် Trapcode Suite 15.1 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၄၈ နာရီ Flash ရောင်းချမှုယခုစတင်သည် NAB သတင်းများ | 48 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အနီရောင်ဧရာ Trapcode Suite 15.1 ဦးလွတ်မြောက်; 48 နာရီ Flash ကိုရောင်းရန် Now ကိုစတင်
အနီရောင်ဧရာ Trapcode Suite 15.1 ဦးလွတ်မြောက်; 48 နာရီ Flash ကိုရောင်းရန် Now ကိုစတင်
အခမဲ့ update ကိုစာသားနဲ့မျက်နှာဖုံး-based မှုန်စနစ်များနှင့်အထူးနှင့် Form ကိုအတွက်အများကြီးပိုပြီးပါဝင်သည်။ သာ 25 နာရီ 48% ချွတ်အားလုံး Trapcode Suite ထုတ်ကုန်ကိုရယူပါ။
လက်ပံ, OR - ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2019 - Trapcode Suite 15.1, 15D ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်များနှင့်Effects®ပြီးနောက်Adobe®အတွက်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအတွက် tool များ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစုများအတွက်အခမဲ့ update ကို - အနီရောင်ဧရာရုံ Trapcode Suite3၏ရရှိမှုကြေညာခဲ့သည်။ ဒါက update ကိုအသစ်သောစာသားနဲ့မျက်နှာဖုံး-based မှုန်စနစ်များအဖြစ် Trapcode အထူး 4.1 နှင့် Form ကို 4.1 နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အဆင့်မြင့် shadowlet features တွေပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ဤအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ၏အားသာချက်ယူခြင်းငှါ, ဒီဇိုင်နာ updated ခဲ့ပြီး 40 ကျော်အသစ်များကိုရလာဒ်ကဒိထည့်ပြီးပါပြီ။ ဒါက update ကိုဖွင့်မယ့်လအနည်းငယ်, လောကဓာတ်အပြန်အလှန်ကြောင်းမှုန်စနစ်များကိုဖန်တီးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က Dynamic အရည်™ရူပဗေဒအင်ဂျင်ပါဝင်သော Trapcode Suite 15 ၏ပစ်လွှတ်ပြီးနောက်လာနှင့်လက်တွေ့အရည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရောမွှေပါ။
Flash ကိုရောင်းရန်: 25 နာရီများအတွက်အားလုံး Trapcode Suite ကုန်ပစ္စည်းများ 48% ဟာ Off ရယူပါ!
ရုံ 48 နာရီ, Trapcode Suite အပေါင်းတို့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ Trapcode ထုတ်ကုန် (စုစုပေါင်း 11) သည်အနီရောင်ဧရာအွန်လိုင်းစတိုးအပေါ် 25% ချွတ်ဖြစ်လိမ့်မည်. အဆိုပါ flash ကိုရောင်းချရန် 27 နံနက် PDT ရန်ကုန် (10: 1 ညနေ EST) မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖေဖော်ဝါရီ 00th စတင်သည်နှင့် 1 နံနက် PDT ရန်ကုန် (10: 1 ညနေ EST) မှာသောကြာနေ့, မတ်လ 00st အဆုံးသတ်နှင့်အပြည့်အဝလိုင်စင်, အဆင့်မြှင့်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်ပါဝင်သည် (ဖြစ်သော ပြီးသား)% ကိုချွတ် 50 ။ ကုဒ်ကိုသုံးပါ TRAPCODE25 ရောင်းချစျေးနှုန်းကိုလက်ခံရရှိရန်။
ရောင်းရန်စျေးနှုန်းကတော့ Trapcode Suite အပေါင်းတို့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ tools တွေကိုကောင်းမွန်သည်။ ဥပမာအားစျေးနှုန်းလည်းပါဝင်သည်:
Trapcode Suite - $ 749 (REG $ 999 ။ )
Trapcode အထူး - $ 299 (REG $ 399 ။ )
Trapcode Form ကို - $ 149 (။ REG $ 199)
Trapcode Mir - $ 74 (REG $ 99 ။ )
Trapcode Tao က - $ 74 (REG $ 99 ။ )
Trapcode Shine - $ 74 (။ REG $ 99)
TRAPCODE suite တှငျအဘယျ'S NEW 15.1
TRAPCODE အထူးသ 4.1
အနီရောင်ဧရာ Trapcode အထူး3နှင့်အတူအော်ဂဲနစ် 4.1D မှုန်သက်ရောက်မှု, ရှုပ်ထွေးသောရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်နှင့်ပိုပြီးဖန်တီးပါ။
အထူး 4.1 အတွက်နယူးအင်္ဂါရပ်များပါဝင်စေ:
စာသားမထုတ်လွှတ် - ယခင်ဗားရှင်းကနေသိသိသာသာဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အထိအရှိန်တစ်ခုထုတ်လွှတ်အဖြစ်စာသားကိုကိုသုံးပါ။ အဘယ်သူမျှမ precomping လိုအပ်သည်။ စာသားလမ်းကြောင်းတလျှောက်အမှုန်၏ထုတ်ဖေါ်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်ရေးသားမှု-အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပါ။
မျက်နှာဖုံးထုတ်လွှတ် - ကရိုးရှင်းပြီးထူးခြား shaped ထုတ်လွှတ်သည့်အရာများကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်အမှုန်ထုတ်လွှတ်မှု၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ပုံတစ်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုရန်အောင်အနေနဲ့ထုတ်လွှတ်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းမျက်နှာဖုံးများ။ အဘယ်သူမျှမ precomping လိုအပ်သည်။ မျက်နှာဖုံးလမ်းကြောင်းတလျှောက်အမှုန်၏ထုတ်ဖေါ်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်ရေးသားမှု-အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပါ။
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်ဒီဇိုင်နာ - ဒီဗားရှင်းအသစ်ကဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ဒီဇိုင်နာတိုက်ရိုက်စာသားနဲ့မျက်နှာဖုံးလမ်းကြောင်းကို-based သက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးရန်အောင်, စာသားနှင့်မျက်နှာဖုံးများများအတွက်ထောက်ခံမှုဖြစ်ပါတယ်။
Shadowlet မှုန်အမျိုးအစားကိုက်ညီခြင်း - အဆိုပါသတင်းရပ်ကွက်ကကိုက်ညီမှု shadowing များအတွက်အမှုန်အမျိုးအစားဖို့ shadowlet ပုံသဏ္ဍာန်တွဲဖက်ပါ။ ယခင်ကအားလုံး shadowlets မြို့ပတ်ရထားခဲ့ကြသည်။
Shadowlet နူးညံ့မှု - သင့် shadowlet ၏နူးညံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ပါ။
ကြိုပြီးချမှတ်ထား - 21 အသစ်သောရလာဒ်ကဒိသငျသညျလက်ငင်းရလဒ်များကိုပေးနှငျ့သငျ features အသစ်နှင့်အတူစတင်ရေးသားရန်အတွက်ထည့်ပြီးပါပြီ။ အထူးနှင့်အတူထည့်သွင်း 355 ရလာဒ်ကဒိကျော်ယခုရှိပါတယ်။
NOW ကကြည့်လိုက်ပါ: နယူး Trapcode အထူးတှငျအဘယျရဲ့ 4.1
TRAPCODE ပုံစံ 4.1
အနီရောင်ဧရာ Trapcode Form ကို3နှင့်အတူအကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်အတွက်မသေနိုင်တဲ့အမှုန် Grid နှင့် 4.1D မှုန်တ္ထုကိုဖန်တီးပါ။
Form ကို 4.1 အတွက်နယူးအင်္ဂါရပ်များပါဝင်စေ:
စာသားမ Form များ - ယခင်ဗားရှင်းကနေသိသိသာသာဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အရှိန်မြှင့်တစ်အခြေစိုက်စခန်းပုံစံအဖြစ်စာသားကိုကိုသုံးပါ။ အဘယ်သူမျှမ precomping လိုအပ်သည်။ ဒါ့အပြင်ရေး-on ကိုဘယ်မှာမှုန်ဖန်တီးနေကြသည်စာသားလမ်းကြောင်းတလျှောက်ကိုထိန်းချုပ်ကြောင့်သက်ရောက်မှုများအတွက်ရွေးချယ်စရာပါဝင်သည်။
မျက်နှာဖုံး Form များ - အကျိုးသက်ရောက်မှု / လမ်းကြောင်းကို tools တွေ mask, ဒါမှမဟုတ်ပုံစံ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ပုံတစ်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုရန်ပြီးနောက်ရိုးရှင်းသောပုနှင့်အတူပုံစံများကိုဖန်တီးရန်အောင်တစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းပုံစံအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းမျက်နှာဖုံးများ။ အဘယ်သူမျှမ precomping လိုအပ်သည်။ မျက်နှာဖုံးလမ်းကြောင်းတလျှောက်အမှုန်၏ထုတ်ဖေါ်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်ရေးသားမှု-အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပါ။
ကြိုပြီးချမှတ်ထား - 21 အသစ်သောရလာဒ်ကဒိသငျသညျလက်ငင်းရလဒ်များကိုပေးနှငျ့သငျ features အသစ်နှင့်အတူစတင်ရေးသားရန်အတွက်ထည့်ပြီးပါပြီ။ 170 ရလာဒ်ကဒိကျော်ယခုရှိပါတယ် Form ကိုအတူပါဝင်သည်။
Trapcode 15.1 မှ Update ကို
Trapcode Suite 15 အသုံးပြုသူများကဒီမှာအခမဲ့ Trapcode 15.1 ဖို့ကို update သို့မဟုတ် update လုပ်ဖို့နီဧရာ Link ကိုသုံးနိုင်သည်။
NOW ကကြည့်လိုက်ပါ: Trapcode Form ကို 4.1 အတွက်နယူးကဘာလဲ
TRAPCODE suite အသစ်?
တစ်ဦးအခမဲ့အစမ်းဒီမှာ Download လုပ်ပါ။
-App ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ: tools တွေကိုအားလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ကို Adobe အတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ Trapcode Shine, Starglow နှင့် 3D လေဖြတ်လည်း Premiere Pro မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
OS ကို: အားလုံး tools တွေကို Windows နဲ့ Mac အတွက်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
တိကျတဲ့အိမ်ရှင်-app နဲ့ OS ကိုလိုက်ဖက်မှုများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများကိုစစ်ဆေးပါ။
အနီရောင် Pledge မျှဝယ်ယူမှုကူညီပြီးအတူဖောက်သည်ပျော်ရွှင်မှုကိုမှအနီရောင်ဧရာရဲ့ကတိကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မှာအနီရောင် Pledge အာမခံချက်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ www.redgiant.com/redpledge/ ။
တစ်ဦး Trapcode Suite 15.1 မီဒီယာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Kit တောင်းဆိုခြင်း
မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များနီဧရာ Trapcode Suite ပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်အနီရောင်ဧရာထံမှမဆိုတစ်ဦးချင်းစီ tools များသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အစုံရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကတစ်ခုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ကိရိယာအစုံတောင်းဆိုရန်မှာနစ်ခ် Govoni ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected].
48 နာရီ flash ကိုရောင်းချရန် Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor အနီရောင်ဧရာ SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို trapcode suite ကို 15.1 က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-02-27
ယခင်: Sacramento ဓမ္မရာဇဝင် Quantum StorNext နှင့် CatDV နှင့်အတူဝါသနာရှင်အတွေ့အကြုံအပေါ်အမြင့်ရမှတ်
နောက်တစ်ခု: ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Todd ဒေါက်ဂလပ် Miller က SMPTE အတူမိတ်ဖက်အတွက်ထုတ်လုပ်ရုပ်ရှင်ရုံညီလာခံ၏ 2019 NAB Show ကိုရဲ့အနာဂတ်မှာ Keynote တင်ပြ